ubuntu 8.04 မှာ other computer's share ကို ဘယ်လို ရှာမလဲ ? - MYSTERY ZILLION
ubuntu 8.04 မှာ other computer's share ကို ဘယ်လို ရှာမလဲ ?
May 2008 edited July 2008 in Ubuntu
ကျွန်တော်ရဲ့ubuntu မှာ network ကတော့ vpn use တယ်.......
ကျွန်တော်တို uni မှာ တခြား လူတွေက window xp use ကြတယ်ဗျ..........
အဲဒါဘယ်လိုလုပ် ရမလဲပြောကြပါ အုံး..............
pls try to use samba client
it shouldbpre-installed in ubuntu 8.04.
mine has that one, i can easily access others.
but i dont know why u dont have it.
ကျွန်တော် run တာပဲ....မရလို ့..........
nyinechanyar wrote: »
ကျနော်လဲ စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ ubuntu 8.04 မှာ Samba ကို run သော်လည်း မရပါ.
ဒါပေမဲ့ kubuntu မှာတော့ kubuntu တင်ပြီးရင်ဆိုရင်ဖြင့် Samba က ပါလာပြီးသားပါ.
kubuntu မှာတော့ ချိတ်ဆက်လို့ ရပါတယ်။ (Window Network ရော အခြား ubuntu Network ရော၊ မိမိစက်မှာ ခွဲထားတဲ့ partition (Window and Linux) အကုန်လုံးကို ကြည့်လို့ရပါကြောင်း....